Fanafody avy amin’ny artemisia Manomboka dinganin’ny firenen-kafa i Madagasikara…
Manomboka sesilany ny fikarohana miainga amin’ny artemisia manaraka ny dian’i Madagasikara. Raha firaisan-tsaina sy hambo-po Afrikanina no nafana teo aloha, dia manomboka misy misalovana i Madagasikara.
Aiza ireo komity siantifika niketrika azy io? Nisy ireo vondrona manam-pahaizana niahiahy saingy nangina tanteraka. Adihevitra be mandrak’androany ny raharaha CVO, izay tsy hoe ratsy fa misy zavatra tokony hampiana na hatsaraina sy porofoina mba hampisinda ny ahiahy. Voa mafy ny manam-pahaizana Malagasy raha misy mangalatra ny fikarohantsika satria nisy herim-po tao. Zavatra mbola tsy voaharo, dia efa homentsika ny vahiny. Manomboka halain’ny olona sy mody hamboamboariny ny fikarohana na mety halainy sy mody hatsaratsarainy mihitsy “formule” hitan’i Madagasikara. Ilay dokotera Congolais Jérôme Munyangi, avy sesin-tany tany Frantsa , ohatra, dia ny Filohany Félix Tshisekedi mihitsy no nampaka azy, ary milaza ny hanao fikarohana momba ny Artemisia I RD Congo. Niasa tamin’ny “Maison de l’artemisia” tany Frantsa izay nandefa ilay taratasy tamin’ny Filoham-pirenena Malagasy izy ary naneho, fa samy nitadiavan’io ONG io fiaraha-miasa ny firenena Afrikanina maro, ka isan’izany I Madagasikara. Milaza fa manao “essai Clinique” ary manana “protocole” mazava izay efa natao tolo-kevitra tamin’ny Vondrona Afrikanina sy ny OMS. Ny an’i Madagasikara dia tsy misy “protocole clinique”, hoy izy. Tisane ny azy ireo izay Artemisia miampy zava-maniry fitsaboana hafa. Ny anay dia “Protocole” ary misy sary (schéma) mazava sy manaraka tsara ny fenitra na ny “norme de la recherche scientifique” fa tsy tahaka ny an’i Madagasikara, hoy io Dokotera Congolais io nanamaivana ny antsika.